विसं २०७८ मा तीन वटा दशैँ — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । विसं २०७८ मा तीन वटा दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ । बैशाख ७ गते मङ्गलबार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख छ ।
असोज २७ गते बुधबार महाअष्टमी, असोज २८ गते बिहीबार महानवमी र असोज २९ गते शुक्रबार विजयादशमी पर्व परेको छ । कार्तिक कृष्ण पक्षमा शुरु भएर शुक्ल पक्षमा सकिने तिहार कात्तिक १६ गते मङ्गलबार शुरू हुनेछ । दशैँ र तिहारलाई नेपालमा विशेषरूपमा मनाइन्छ । लक्ष्मीपूजा कात्तिक १८ गते बिहीबार र भाइटीका कात्तिक २० गते शनिबार परेको छ ।
चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने दशैँलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपालीले ठूलो चाडका रूपमा मनाउँछन् । शक्तिको आराधना गर्न वर्षमा चार नवरात्र पर्ने भए पनि चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्लको दशैँलाई नेपालीले महत्वका साथ मनाउने गरेको समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा.डा रामचन्द्र गौतम बताए ।
शुक्र ग्रहको राशी परिवर्तन हुँदा कसलाई कस्तो प्रभाव ?
भौतिक सुख सम्पन्नता, प्रेम रोमान्स र विवाहका कारक ग्रह शुक्र गत साता फागुन २ गतेबाट अस्त भएको थियो । तर सोहि ग्रह अब भने राशी परिवर्तन गरी फागुन ९ गते आइतवारबाट मकर राशीबाट निस्किएर कुम्भ राशीमा प्रवेश गर्दैछ ।
यो राशी परिवर्तन चैत ४ गतेसम्म रहनेछ । शुक्रको राशी परिवर्तनका कारण कुन राशीमा कस्तो प्रभाव पर्दछ त ?
यस राशीका जातकलाई शुक्रको राशी परिवर्तनका कारण व्यापारमा लाभ, दाम्पत्य जीवन सुखद् हुनुका साथै रोकिएको धन फिर्ता हुने शुभ समय रहेको छ ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकलाई समय अनुकूल रहे पनि सुखद् परिणाम प्राप्त हुने छ । जागिरमा लाभ हुनुका साथै पद प्रतिष्ठामा स्तर उन्नती हुने समय छ ।
यस राशीका जातकलाई शुक्रको राशी परिवर्तनका कारण भाग्यमा उदय हुनेछ । जागिरको खोजीमा रहेकाहरुले जागिर भेट्ने, आर्थिक स्थिति राम्रो हुने तथा सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकलाई उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै कार्यक्षेत्रमा विवाद हुने, गुप्त शत्रु बढ्ने तथा स्वास्थ्यमा समेत समस्या पर्न सक्छ ।
यस राशीका जातकलाई यो परिवर्तनका कारण सरकारी कार्य पूरा हुने, वैवाहिक जीवन सुखद् हुने र पूजापाठमा रुचि बढ्नेछ । तथापी वाणी र भावनामा नियन्त्रीत हुनु पर्नेछ ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकको स्वास्थ्यमा समस्या, विवाहको स्थिति टर्ने, जीवनसाथीसँग मनमुटाव हुने साथै विद्यार्थीकालागी अनुकूल समय रहेको छैन ।
यस राशीका जातकलाई यस परिवर्तनका कारण प्रतियोगिहरुको परीक्षामा शुभफल प्राप्त हुने, सरकारी जागिरको योग बन्ने, आर्थिकस्थिती सुधारीने र सन्तान सुख पाउन समय छ ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकले व्यापारमा उन्नती, घर निर्माण तथा वाहन खरिदको योग, सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने समय छ । तर बोल्दा विचार पुर्याउनु होला ।
यस राशीका जातकलाई यस परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा असर, दाजुभाइ दिदिबहिनीसंग मतभेद हुने सम्भावना छ । तर जागिर र व्यापारमा भने लाभ हुनेछ ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकलाई अत्यन्त शुभ समय छ । अचानक आयमा वृद्धि, सम्मान वृद्धि, जागिरको अवसर तथा पारिवारिक जिम्मेदारी प्रेमपुर्वक हुने समय छ ।
यस राशीका जातकलाई यस परिवर्तनले समय लाभकारी बनाउने छ । भौतिक सुखमा वृद्धि, घर तथा वाहनको खरीद, स्वास्थ्यमा लाभ हुनेछ । तर खर्चमा विशेष नियन्त्रीत रहनुहोला ।
शुक्रको राशी परिवर्तनले यस राशीका जातकले केहि समस्या भोग्नुपर्ने, खर्च बढ्ने, स्वास्थ्यमा समस्या तथा दाम्पत्य जीवनमा समेत टकराव आउने छ ।